रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन लसुन र महको सेवन यसरी गरौं ! एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला – Annapurna Daily
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन लसुन र महको सेवन यसरी गरौं ! एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला
On Jun 3, 2021 2,905
लसुन र मह दुबै प्राकृतिक गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । यदि दुबैलाई मिश्रण गरेर सेवन गर्ने हो भने, कतिपय रोगको समेत निदान गर्न सहयोग गर्छ ।लसुन मसलेदार खानालाई स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यसो त यसको औषधिय महत्व पनि उत्तिकै हुन्छ ।
त्यस्तै मह जति स्वादिलो हुन्छ, उत्तिनै लाभदायक पनि । यसले सौन्दर्य बढाउनमा खास सहयोग गर्छ । मह र लसुनको मिश्रण खानाले मुटुको धमनीमा जमेको वोसो निक्लन्छ । जसले गर्दा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनदेखि जाडोमा हुने दुखाईबाट छुटकारा पाउन पनि यसको मिश्रण उपयोगी हुन्छ ।
कसरी बनाउने मिश्रण ? : यसका लागि २ वा ३ ठूलो केस्रा लसुनलाई हल्का दबाएर कुट्ने । त्यसमा शुद्ध मह मलिाउने । यस मिश्रणलाई त्यसबेला सम्म राख्नुपर्छ, जबसम्म लसुनमा राम्ररी मह मिश्रण हुदैन । अब यसरी तयार भएको लसुनलाई बिहान खाली पेट सात दिनसम्म खानुपर्छ । लसुन र महको मिश्रणमा एन्टि बायोटिक तथा एन्टि ब्याक्टेरियल जस्ता केहि पोषक तत्व सामेल हुन्छ, जो छाला र स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । लसुनमा एलिसिन र फाइबर जस्ता न्यूटि्रएन्ट्स हुन्छ ।